Akhriso: Nuxurka hadal jeedintii guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Akhriso: Nuxurka hadal jeedintii guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti
Akhriso: Nuxurka hadal jeedintii guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti
Guddoomiyaha Baarlaamanka Wadanka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud oo maanta ka qeybgalay kulankii xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa siweyn uga hadlay xiriirka u dhexeeya labada dal.
Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho waxaa Maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ,waxana kulanka goobjoog ka ahaa 173 Mudane.
Kulanka Maanta ayaa ka duwanaa kulamadii hore,waxaana hortegay xildhibaanada isla markaana khudbad dheer u jeediyay gudoomiyaha Baarlamanka dowladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti.
Kulanka oo ay goob joog ka ahaayeen ilaa 173 mudane ayaa waxaa uu khudbadiisa uu diiradda ku saaray ujeedka booqashadiisa,wuxuu muujiyay in ahmiyada ay leedahay wadashaqeynta labada Baarlamaan ee Soomaaliya iyo Jabuuti iyo taageerada ay siiso Soomaaliya Dowladda Jabuuti.
“Ujeedka socdaalkeyga waxaa uu yahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka walaaltinimo ee Soomaaliya iyo Jabuuti,waxaa inaga dhexeeya xiriir walaaltinimo oo aad u wanaagsan,Soomaaliya waxaan u sheegayaa qofkasta oo muwaadin ah waxaa waajibaad uu ka saaranyahay in uu dalkiisa wax u qabto”, ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo khudbad ka jeediyay kulankaasi, isagoo ku ammaanay guddoomiyaha Baarlamaanka Dalka Jabuuti imaatinkiisa Soomaaliya,isagoo xusay in xiriirka ka dhaxeeya labada dal gaar aahan baarlamaanada uu yahay mid wanaagsan, islamarkaana uu ahaa mid soo jireen ah.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo “Waxaad tihiin dufcaddii ugu horraysay ee dhallinyaro ah oo ka jawaabay baaqaygii, una istaaga in ay nafootada u huraan dalkooda”
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galaya Munaasabada loogu dabaal dagayo Aas aaskii Radio Muqdisho